Malunga nathi -Henzhen Ronghua Technology Co., Ltd.
I-Shenzhen Ronghua Technology Co, Ltd. esekwe ngo-2013, ngumvelisi ogxile kwi-R & D, ulwenziwo, imveliso, ukuthengisa kunye nenkonzo yeemodyuli zekhamera, iimodyuli zekhamera ye-USB, iilensi kunye nezinye iimveliso.
Inkampani ifumene izatifikethi ze-ISO9001, CE, ROHS, ul kunye ne-SGS. Iimveliso azithengiswa kuphela eTshayina, kodwa zithunyelwa kumazwe ahlukeneyo nakwimimandla, kubandakanya iYurophu, iMelika kunye noMzantsi mpuma Asia. Siphumeza ulawulo olungqongqo lomgangatho kuyo yonke ikhonkco ukusuka ekuthengeni izinto zokwenza imveliso, ukuqhubekeka, ukuvavanya ukupakisha. Ukongeza, sizinikezele ekuphuhliseni iimveliso ezintsha ukuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo zabathengi.
Sikwamkela ii-odolo ze-OEM kunye ne-ODM, kwaye sinikezela ngeenkonzo zokuma endaweni enye kubandakanya i-PCB, i-PCBA, i-SMT patch, i-PCBA emva kokuthengiswa kwe-soldering, ukuqhubekiswa ngezinto ezibonelelweyo, izinto ze-OEM, ii-odolo ze-BOM, iinkqubo kunye novavanyo.
Inkampani edesika ngaphambili
Isatifikethi kunye noMgangatho
Abasebenzi bethu banamava kwaye bazinikele kuhlolo lomgangatho olungqongqo kunye nenkonzo yabathengi enolwazelelelo. Sisebenzisa izixhobo ezizenzekelayo ukulawula ngokungqongqo umgangatho weemveliso kunye nokuphumeza ulawulo lomgangatho olungqongqo kuyo yonke ikhonkco kuthengwa kwempahla eluhlaza, ukuqhubekeka, ukuvavanya ukupakisha. Sibambelela kumgaqo wokuxhamla kunye kwaye sinandipha igama elihle phakathi kwabathengi bethu kuba sinikezela ngenkonzo egqibeleleyo, iimveliso ezikumgangatho ophezulu kunye namaxabiso aphantsi.
Amacandelo oShishino amane
Ngokukodwa kwimveliso yeemodyuli zekhamera ye-FPC, iimodyuli zekhamera ye-SENSOR, iimodyuli zekhamera ye-USB, iimodyuli zekhamera ye-binocular, iimodyuli zekhamera ye-AHD, iimodyuli zekhamera yesiko, i-LENS, njl.
Isicelo: ikhaya le-smart, i-Intanethi yeZinto, iikhamera eziphathwayo, izixhobo zonyango, ii-endoscopes zeepilisi, ukuvavanywa kobushushu bomzimba, ukuqondwa kobuso, iirobhothi ezifanelekileyo, iidroni, iimoto, iikhamera ezikhawulezayo, iithoyi, iDV, i-MP4, MID, isikena sekhowudi ye-QR, ibhakhowudi ukuskena, iikhamera zokujonga kwicandelo lokhuseleko nakwezinye iinkalo.
Ngemigca emitsha yokuvelisa ukubekwa kwesantya esiphezulu kwe-SMT, kunye nezixhobo ezahlukeneyo zovavanyo lokuvelisa imveliso, ukunyusa okuzenzekelayo kufezekiswa nokuba kungu-0201, 0402, BGA, FBGA, QFN, QFP, okanye zonke iintlobo zamacandelo amile ngokukodwa kunye neemodyuli zonxibelelwano. , ezinokwanelisa imveliso kunye nokulungiswa kweemveliso ezahlukeneyo.
Sigxila kwimveliso yokuchaneka okuphezulu emngxunyeni we-PCB ene-FR4, iibhodi zesekethe ezinamacala amabini, iibhodi zesekethe ezininzi, ii-aluminium ze-substrates ze-FPC, iibhodi zesekethe eziguqukayo, iibhodi eziguqukayo nezingqongqo, kunye neebhodi zePCB ezikumgangatho ophezulu.
Ukuthengwa kweziNto ezingavuthi
Ngababoneleli bexesha elide bokusebenzisana, sinokuthenga iimveliso ngobuninzi ukunciphisa iindleko. Siqhelene nefuthe lamacandelo ahlukeneyo kumgangatho wokulungiswa kwemveliso, kunye nokuseka inkqubo engqongqo yokuhlola kunye nokuvavanya ukulawula umgangatho wokulungisa, ilahleko kunye neminye imingcipheko, kunye nokunciphisa ilahleko.
Yenza ixabiso kubathengi bethu!
Ukubonelela ngeemveliso eziphambili zeteknoloji!
Ukukhuthaza ukukhula kunye nenzuzo ngaxeshanye!
Ukukhuthaza inkqubela phambili eqhubekayo yenkampani kunye nokudala imeko yokusebenza efanelekileyo kubasebenzi bethu!